Agaasimaha SONNA “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan Kismaayo ka furno xafiiskii SONNA” – Radio Muqdisho
Agaasimaha SONNA “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan Kismaayo ka furno xafiiskii SONNA”
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliya ee Sonna ayaa ayaa xafiiskii ugu horeeyay oo ka baxsan magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya waxay ka furatay magaalada Kismaayo ee Xarunta gobalka Jubbada Hoose.
Xafiiskaan cusub ayaa sida wadajir ah waxaa xariga kaga jaray Wasiirka Warfaafinta dowlad gobaleedka Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan iyo Agaasimaha Guud ee Waraadda Warfaafinta Soomaaliya Mudane Cabdirisaaq Cali Yuusuf Bahlaawi.
Agaasimaha Guud ee Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliya ee SONNA Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cadaala oo ka hadlay furitaanka Xafiiskaan cusub ayaa sheegay in howshaan waqti ay soosocotay laakiin maanta lagu guuleestay.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan halkaan ka furno xafiiskii ugu horeeyay oo Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ay ku yeelato gobalada dalka, kaas oo noqonaya ku dhowaad 30-sano ka dib in SONNA mar kale xarun ku yeelato Kismaayo.” Sidaasi waxaa yiri Agaasimaha Guud ee Wakaaladda SONNA.
Mudane Cabdinaasir Axmed Bashiir (Saxansaxo) oo ah Madaxa SONNA ee Jubbaland ayaa asna sheegay in xafiiskaas uu noqon doonon midka soo gudbin doona wararka deegaanada Jubbaland ee saxda ah si ay u helaan dad waynaha Soomaaliyeed.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi ayaa sheegay in xafiiskaan laga furay kismaayo uu horseed u noqon doono xarumo badan oo Wakaaladdu ku yeelan doonto dhamaan dalka.
Ugu danbayntii Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta ee Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan oo ayaa tilmaamay in dowlad gobaleedka Jubbaland aad u soo dhaweynayso Xafiiska Cusub ee SONNA ee laga hirgaliyay magaalada Kismaayo.
Wakaaladda Wararka Soomaaliya ee SONNA ayaa horumar wayn ku talaabsatay tan iyo markii bishii Janaayo ee sanadkaan Agaasimaha Wakaaladda loo magacaabay Mudane Cabiraxmaan Yuusuf Sheekh Cadaala oo horay u ahaa Agaasimaha Tvga Qaranka, sidoo kalana soo noqday Agaasimaha Guud ee Warbaahinta Qaranka Soomaaliya.
Madaxweynihii hore ee Masar oo lagu xukumay xabsi daa’in
Tababar loo qabtay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada Galmudug+Sawirro